Mumwe Mubvunzo Waunoda Kubvunza pane Yako Inotevera Ongororo | Martech Zone
Mumwe Mubvunzo Waunoda Kubvunza pane Yako Inotevera Ongororo
China, November 9, 2006 Mugovera, Chivabvu 2, 2015 Douglas Karr
Shamwari yangu yakanaka Chris Baggott ane chikuru pambiru nhasi nezve ongororo. Ndiri muchibvumirano chakazara naChris. Ndokumbirawo usandibvunze zano rangu kana usiri kuzoita chero chinhu neruzivo. Chero ani anondiziva anoziva kuti ndinoda kupa maonero angu… dzimwe nguva kukanganisa. Shamwari dzangu dzinonyatso ziva kuti dzinogona kuvimba neni.
Pane zvikonzero zviviri zveizvi:
Ini ndiri munhu ane shungu uye ndakura zvekutamba mitambo. Ini ndinoona sekuti nguva iri kutekenya, saka sei uchirova kutenderera musango!
Kana ini ndichigara ndichitaura zvandinoreva uye ndichireva zvandinotaura, saka vanhu vanogara vachiwana iyo nyaya yakafanana kubva kwandiri. Vanoziva kuti ini handisi kuvaudza chimwe chinhu kungoti ivo vanzwe zvavanoda ivo.
Asi… kana ukaramba uchikumbira kuraira kwangu, ndiudze kuti unochida, uye woenderera mberi uchichirasa… saka handisi kuzoshandisa nguva yangu newe munguva inotevera. Izvo hazvireve kuti haugone kupokana, ini ndinowanzo kukanganisa. Ini ndinongoreva kuti kana kurudziro yako iri kundipa bs kuti ndinzwe sekunge ndinokosheswa, ini handidi kutambisa nguva yangu newe. Uye handidi.
Ongororo dzakangofanana neizvi. Ini handizive nezve chero kambani isingazive nezve marwadzo pointi kumutengi. Ichokwadi ndechekuti makambani mazhinji ane vanhu vanonzwisisa ese marwadzo evatengi vavo, zvinofarirwa nevanhu, uye zvisingagone kumira nevanhu. Dambudziko nderekuti hatinetseke kuteerera kusvikira tagadzirira. Ndizvozvo chaizvo kuongororwa - kuri kuti kumutengi wako, "Zvakanaka, ndakagadzirira kukuteerera ... ndokumbira undiudze zvaunoda nezvausingade nezvangu."
Ongororo dzinofanira kutarisa zvakanyanya zveyero. Padivi rechokwadi, mibvunzo inooneka inogona kuguma nemhinduro yakayerwa yakanaka. Kundikumbira kuti ndimboyera kuremekedza kweconccigege kuseka. Wese munhu anoziva kana yako concierge ine hunhu kana kwete. Kundibvunza kuti ndeupi size yehembe yandinopfeka kuti ndikwanise kutevera uye kukuunzira imwe yakanaka. Kundibvunza kana ndichida A vs. B kwakanyanya… kunyanya kana uchidzoka neuyo wandasarudza.
Kune rimwe divi rechikero kwakakosha zvakaenzana. Imwe shamwari, Pat Coyle, akagovana neni nyaya kamwe apo kambani yaingova nemubvunzo mumwe chete paongororo yavo…
Ungatikurudzira kushamwari here?
Icho chokwadi ndechekuti mumwe munhu mukambani yako anoziva zvinogona kuvandudzwa. Vanogona kutya kuzvitaura. Kana ivo vanogona kunge vasina kutenga-mukati kuti vazvigadzirise. Kana, kazhinji kazhinji, ivo vanoziva kuti hazvigadziriswe saka nei uchinetseka. Kana usiri kuzoteerera kune vako vashandi, mikana ndeyekuti hausi kuzoteerera kune ako vatengi.
Tsvagurudzo zvakare chikafu che 'kutsigira' zvaunotenda. Udza maneja zvinhu gumi zvepamusoro zvavanofanira kugadzirisa zvichibva pakuferefeta kwako uye dzimwe nguva unongodzingwa seunopenga. ASI… ipa mashoma mashoma masampuli kubva kune ako vatengi ayo anotsigira epamusoro gumi zvinhu, uye kamwe kamwe vanhu vanoteerera. Hazvisi izvo zvinosuruvarisa here? Ndofunga kudaro!
Ini handisi kukurudzira kudzimura kutaurirana nevatengi vako. Zvakapesana neizvi, ndiri kuti TARISA pakukurukurirana nevatengi vako. Ongororo haisi kutaurirana. Kazhinji kacho nzira mbiri. Saka rega kuzviita. Rega vashandi vako vakuudze izvo zviri kutaurwa nevatengi uye vazvigadzirise.
Uye kana iwe uchinyatsoda kuziva nezve izvo vatengi vako vanofunga nezvako, mumwe nyore mubvunzo wakakwana:
Tags: kuongorora kwevatengiimwe yemubvunzo ongororotsvakurudzoMibvunzo yekuongorora
4 Masekonzi kana Bust
Old Spice yakave inotonhorera riini?
Jun 7, 2016 pa3: 34AM